Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation Islamika amin'ny Oma Devi | Nagina: Raharaha niaina taloha izay misy ny famonoan'olona, ​​ny fanovana fivavahana sy ny fanavaozana fanavaozana - fikarohana Reincarnation
From: Afaka mihemotra lavitra ny fahafatesana ve ny saina? Volana 1: Fikarohana momba ny vatana vaovao, avy amin'i Satwant Pasricha, PhD
Ny fiainana sy ny famonoan-tena an'i Oma Devi
Oma Devi dia mpampianatra iray nipetraka tany Farrukhabad ao amin'ny distrikan'i Indiana Uddar Pradesh, izay tranon'ilay malaza Taj Mahal. Mpivarotra nivarotra boky sy niorina tao Mohammadabad ny vadiny. Ny finoana an'i Hindu no mpivady ary manan-janaka efatra izy ireo, zazalahy roa ary roa vavy.
Indrisy, Oma Devi sy ny vadiny dia nanana fanambadiana ratsy. Tamin'ny volana May 19, 1987, nanana adihevitra goavana ireo mpivady ireo ary naneho hevitra, nanipy kerozèna ny tenany i Oma ary nandoro ny tenany tamin'ny afo nialany. Izy dia 47 taona isan-taona rehefa maty izy.
Oma Devi, Hindoa, miorina ao amin'ny fianakaviana Silamo Sunni
Tamin'ny Oktobra 1990, mikasika ny 3 sy ny antsasak'izay aorian'ny nahafatesan'i Oma Devi, zazavavy iray antsoina hoe Nagina no teraka tamin'ny Muslim Sunni fianakaviana, izay tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao. Ny fianakaviana ihany koa dia nipetraka tao amin'ny distrikan'i Farrukhabad, tsy lavitra ny tranon'ny Oma Devi. Ny Amaruddin rainy dia nanao ny fiainany tamin'ny fitaterana ny olona tao amin'ny fehin, fiara mitondra kalesy.
Ny fiainana any am-piadanana: ny fitetezana ny nagia amin'ny famonoan-tena
Raha vao nihoatra ny 1 taona i Nagina, talohan'ny nitenenany ny teniny dia tonga nitsidika ny fianakaviany ny iray tamin'ireo maty tao Amaruddin. Ilay nenitoany dia nangataka menaka sira kely iray, mba handratra ny volony. Nenin'i Nagina avy eo ilay tavoahangy kerosena. Ny nenitoako dia nanontany tena hoe inona no hataony amin'ny kerosene. Nagina avy eo nanao ny fihetsika ny fanosehana ilay tavoahangy kerosena eo ambonin'ny lohany ary avy eo izy dia nanao ny fihetsika ny nandrehitra ny lalao mba hametra-tena. Ny fihetsika natao tamin'ny fanaraha-maso ny lalao dia nitondra fihetsika miverimberina teo amin'ny lohany.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Ny filazalazana momba an'i Nagina Oma, izay nanao famonoan-tena
Raha 3 taona i Nagina ary afaka niteny, dia nilaza izy fa fony izy mbola velona dia mpampianatra iray antsoina hoe Oma izy ary nanana zanakavavy 2 sy zanaka 2. Nagina no nizara izany rehefa nifampiresaka tamin'ny vadiny izy, nanipy kerosene teo amin'ny vatany izy ary nandoro ny tenany.
Ny fianakavian'i Amaruddin, araka ny nomarihina, dia tsy nino ny fitsangatsanganana indray ny vatana vaovao ary niezaka ny hanakana ny fahatsiarovan-tenan'i Nagina tamin'ny alalan'ny fanoherana azy teo amin'ny lohany. Tsy nahomby io paikady io, raha mbola nanohy niresaka momba ny fiainany taloha i Nagina.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Fantatr'i Nagina ny tsiambaratelon'ny ankohonany ary nalahelo ny fahafatesan'ny vady taloha izy
Rehefa ren'ny zanak'i Oma Devi roa lahy momba ny fanambarana nataon'i Nagina momba ny fahazoana mialoha izay nandoroany ny tenany dia tonga nitsidika azy izy ireo. Nagina no nizara antsipiriany momba ny fiainan'i Oma izay tsy fantatra tany ivelan'ny fianakaviana. Mifototra amin'io fijoroana vavolombelona io, ny loholona Oma Devi dia resy lahatra fa i Nagina dia nateraka indray ny reniny. Ny zandriny dia tsy nahalala izay tokony hatao.
Nifandray tamin'ny fianakaviana ireo fianakaviana. Tamin'ny Aprily 1996, fony Nagina dia 5 ary ny antsasaky ny taona dia maty ny vadin'i Oma Devi. Na dia teo aza ny fifandirana izay noraisin'i Oma sy ny vadiny, dia tezitra mafy i Nagina noho ny fahafatesan'ny vadiny taloha.
Dr. Pasricha dia nanamarika fa ny Nagina dia nanana tarehimarika miendrika pigmenta na maivana ao amin'ny mofony sy ambany kibo, izay mety ho mifandraika amin'ny hoditra naterak'i Oma Devi.
Validin'ny tantaram-piainan'i Nagina taloha
Ho fanamarihana ny fahatokisan-tena tamin'ilay tranga, nanamarika ny Dr. Pasricha fa tsy azo inoana fa ny fianakavian'i Nagina dia hamorona toe-javatra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, izay manohitra ny fivavahany, indrindra fa ny famonoan-tena. na dia Shiite Muslims dia misokatra amin'ny vatana vaovao, Muslim Sunni, ny sampan'ny finoana fa ny fianakavian'i Nagina dia tsy manaiky ny vatana vaovao. Tadidio fa niezaka nanakana ny kabariny tamin'ny fiainany taloha ny fianakaviana Nagina na dia sazy ara-batana aza.
Dr. Pasricha dia naneho hevitra ihany koa fa tsy azo inoana raha nianatra momba ny fahafatesan'i Oma Devi i Nagina, ary mety mbola hampihetsi-po kokoa ny fianakaviana iray hampianatra zaza iray hody hanao famonoan-tena. (1)
Fiovana amin'ny finoana: Oma Devi dia Hindu, saingy nateraka ho fianakaviana Silamo Sonita izay tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao indray izy.
Fiainana any an-tokantranony talohas: Nurevika ny mason-koditra sy ny kibony ny naginain'i Nagina, izay nosoratan'i Dr. Pasricha fa mety ho voatery hodorana ny marary naterak'i Oma Deva tamin'ny famonoan-tenany.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Oma Devi dia nipoitra teo akaikin'ny fiainany taloha, izay namela azy ho tafaray tamin'ny fianakaviany taloha. Na dia namono tena aza i Oma Devi taorian'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny vadiny, dia nampiseho ny alahelo i Nagina rehefa maty ny vadiny.
Reincarnation & famonoan-tena: Namoy ny ainy i Oma Devi saingy navaozina indray ny 3 taona taorian'ny nahafatesany, nampiseho fa tsy mamarana ny fivoaran'ny fanahy ny famonoan-tena. Oma Devi dia mety niteraka karma noho ny fanaintainany izay nahatonga ny hafa, izay mety tsy maintsy iainany amin'ny fotoana. Ankoatra izany, i Nagina dia mety hiatrika toe-javatra mitovitovy amin'izany tahaka ny nataon'i Oma Devi, saingy mila maneho fihetsiketsehana bebe kokoa izy. Ho an'ny adihevitra feno momba ireo olana karmika tafiditra amin'ny famonoan-tena, dia jereo ny: Famonoana zaza maty tany Ruprecht Schultz
1. Pasricha, Satwant, Afaka mihemotra ivelan'ny fahafatesana ve ny saina? Volan'ny 1: Fikarohana momba ny fiterahana amin'ny sehatry ny fanambadiana, Harman Publishing House, New Delhi, 2008, pejy 163-165